लगातारको खोकी लागि रहनु राम्राे सङ्केत हाेइन, क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ एक चाेटि पढाैँ - ज्ञानविज्ञान
चिसोमा खोकी लाग्छ, रुघा लाग्छ । हामी ठान्छौं, चिसोको कारण यस्तो भयो । स्वभाविक हो, चिसोले खोकीको मसस्या निम्त्याउँछ । तर, खोकी लाग्नुमा चिसो मात्र कारण हुँदैन । यदि लगातार खोकी लाग्छ भने शंका गर्नुपर्ने हुन्छ ।
किनभने सामान्यतः चिसोमा खोकीको समस्या धेरै हुने गर्छ । यस्ता खोकी पाँच देखि सात दिन भित्रमा आफै निको हुन्छ । त्यसैले, मानिसहरुले यस्ता खोकीलाई गम्भीरतापूर्वक लिदैनन् ।
कतिपय मानिसहरुले यस्ता खोकीको घरमै उपचार गर्छन् । सामान्य रुघाखोकीमा सामान्य औषधीको प्रयोगले खासै असर गर्दैन । तर लामो समयसम्म खोकी लागेमा, खोकी लगातार लागेमा तथा औषधीले पनि खोकी लाग्न कम नभएमा भने तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । किनकी हेर्दा सामान्य लाग्ने यस्ता समस्या कतिबेला गम्भीर बन्ने गर्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन ।
खोकीको कारण फ्लू पनि हुनसक्छ
चिसोका कारण खोकी लागेमा त्यस्ता खोकी धेरै दिनसम्म रहनसक्छ । चिसोका कारण देखिने रुघाखोकी दुई प्रकारका हुन्छन् , सुख्खा र कफ भएको । यस्ता खोकी कफ सहितको भएमा वा गाढा खकार सहितको भएमा खासै डराउनु पर्दैन । किनकी फ्लूको समस्या भएमा पनि यस्ता समस्या देखिने गर्छ ।
फ्लूका कारण यो समस्या देखिएमा प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन गर्नुका साथै आराम गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा यो साता भित्रमै निको हुने गर्छ ।
फ्लुका कारण रुघाखोकी लागेमा डराउनु पर्दैन । एन्टीबायोटिक्सको पनि सेवन गर्नु पर्दैन । औषधी पसलमा पाइने सामान्य रुघाखोकीको औषधीले पनि यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन गरेर तथा आराम गरेर पनि यो समस्या कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, पानीको बाफ लिएर तथा तातो पानी पिएर पनि यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । रातमा खोकीका कारण सुत्नमा समस्या भएमा टाउकाको मुनी अतिरिक्त तकिया राखेर सुतेका गहिरो निद्रा पर्दछ ।
धुमपानले पनि लाग्नसक्छ खोकी
धुमपान गर्नेहरुमा धुवाँका कारण पनि खोकी लाग्ने गर्छ । विशेषगरी, धुवाँका कारण सास नलीमा अवरोध भएमा खोकी लाने गर्छ । जसले गर्दा छातीबाट खकार निस्कने प्राकृति गति सुस्त हुने गर्छ, जसले गर्दा छातीमा जमेको खकार निकाल्न पनि धुमपान कर्तालाई खोक्नु पर्छ ।
धुमपानकर्ताहरुमा यस किसिमको खोकी विहानको समयमा धेरै लाग्ने गर्छ । त्यस्तै, धुमपानकै कारण उनीहरुमा क्रोनिक अब्सट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज -सिओपिडी) लगायत खोकीसित सम्बन्धित अन्य विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या पनि धेरै हुने गर्छ । जस्तो कि हार्ट फेलियर पनि खोकीको एक ठूलो संकेत हुने गर्छ ।
धुमपानका कारण खोकी लागेमा धुमपान छोड्नु पर्दछ । बजारमा धुमपानको तल छोडाउने विभिन्न औषधी पाइन्छ। त्यस्ता औषधीको सेवन गरेर पनि धुमपान त्याग्न सकिन्छ । विशेषगरी, लामो समयसम्म खोकी लागेमा खोकीका कारण सास लिनमा कठिनाई भएमा तथा सास नली फुलेमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
कतै क्यान्सरको लक्षण त हैन खोकी ?
खोकी आफैमा एक सामान्य समस्या हो । कहिलेकाही मात्र यो गम्भीर हुने गर्छ । यसको बाबजुद कुनै समस्या देखिएमा वा कुनै गम्भीर लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सालाई देखाउनु पर्छ ।
किनकी धेरै जसो खोकी केही हप्तामा नै ठिक हुन्छ । तर यदी खोक लामो सयम सम्म निको नभए, खोकीमा खकार देखा परे, खोकी लागेर रगत वान्ता भए तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाएर यसको कारण कतै छातीको संक्रमण वा फोक्सोको क्यान्सर त हैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
फोक्सोको क्यान्सर भएमा बारम्बार छाती दुख्ने, थकान महसुस हुने, गर्दन वा अनुहार सुन्निने, अचानक वजन कम हुने जस्ता लक्षण देखा पर्ने गर्छ ।
हुन त यी सबै लक्षण याद नहुन सक्छ ।र, हालैमा भएको एक शोधले जनाए अनुसार एक तिहाई मानिसमा फोक्सोको क्यान्सरको कुनै लक्षण देखिदैन । त्यसैले, विना लक्षण नै गम्भीर संक्रमण निम्तनु भन्दा पहिले स्वास्थ्य सम्बन्धि कुनै पनि असामान्य लक्षण देखा परे तुरुन्तै चेकजाँच गराएर पनि यस्ता सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ ।
खोकी लाग्दैमा क्यान्सर हुन्छ नै भन्नै छैन । तर जति छिटो रोगको पत्ता लाग्यो, त्यसको उपचार त्यति नै छिटो हुने भएकोले लक्षण देखा पर्नासाथ चिकित्सकलाई देखाउनु उपर्युक्त हुन्छ ।
खोकीको कारण दम त हैन ?
दम भएमा खोकी लाग्ने गर्छ । त्यसैले यसलाई दमको सामान्य लक्षण मानिन्छ । स्वाँ स्वाँसहितको खोकी वा विना स्वाँ स्वाँको खोकी पनि दमको कारण हुनसक्छ । विहान वा रातको समयमा लगातार वा बारम्बार खोकी लागेमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई धेरै देखाउनु पर्छ । दम भएमा छाती कसिने तथा सास लिनमा समस्या हुने गर्दछ । दम भएमा कुनै विशेष कारण हुँदैमा खोकी लाग्दैन, जुन पराग, धुलोधुलोका कणका कारण हुने गर्छ ।
यस्तो लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सकका जानु पर्छ । किनकी समयमै उपचार गरेमा यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अन्यथा,यसले कुनै पनि बेला गम्भीर रुप लिनसक्छ ।
फोक्सोको संक्रमणका कारण पनि लाग्नसक्छ खोकी
यदी खोकी तीन साता वा सो भन्दा अधिक समयसम्म रहिरहेमा तथा सास लिनमा कठिनाई भएमा, सास लिदाँ पिडा महसुस भएमा, छाती घ्यारघ्यार भएमा, सास फेर्दा आवाज आएमा, छाती पोलेमा वा अचानक तौल कम भएमा वा खाना निल्नमा समस्या भएमा पनि फोक्सोको संक्रमण, निमोनिया वा ब्रोनकाइटिस हुनसक्छ ।
विशेषगरी, खोकीका साथमा ज्वरो पनि आएमा र सास लिनमा कठिनाई हुनुका साथै खकारमा रगत देखिएमा सर्तक हुनु पर्दछ । किनकी निमोनिया जस्ता फोक्सोको संक्रमणका कारण पनि यी लक्षण देखा पर्ने गर्दछ । जसको निदानको लागि एन्टीबायोटिक औषधीको सेवन जरुरी हुन्छ ।
यस्ता लक्षण देखा परेमा विभिन्न स्वास्थ्य जाँच गरेर पनि यस्ता संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदी फोक्सो संक्रमण भएको देखा परेमा नियमित औषधीको सेवनका साथमा आराम गरेर पनि यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ ।
हामीले खाेकि सम्बन्धि थप केहि जानकारी दिएका छाै
सामान्य खोकीवाट वाच्नको लागी केहि घरेलु उपाय
अदुवा हालेको चिया खाने
सुक्खा खोकी लागेको बेला अदुवा मिसाएको चिया खाने गर्नाले आराम मिल्छ ।
अग्लो सिरानी हाल्ने
सुक्खा खोकी लागेको बेला अग्लो सिरानी हालेर सुत्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा खोकी कम हुन्छ ।
सुक्खा खोकी लागेको छ भने बेला–बेलामा नाक, घाँटी र छातीमा भिक्स लगाउने गर्नाले खोकी केही हदसम्म रोकिन्छ ।
नुनपानीले कुल्ला गर्ने
मनतातो पानीमा नुन हालेर घोली गार्गल गर्नाले सुक्खा खोकी घट्दै जान्छ ।
सुक्खा खोकी निरन्तर लागेर हैरान बनाएको बेलामा मह खाने गर्नाले सञ्चो हुन्छ । महले घाँटीलाई सुक्खा हुन दिँदैन र सुक्खा खोकी लाग्ने क्रमलाई कम गरिदिन्छ ।
खोकी लाग्दा कुनै पनि हालतमा यी कुराहरु खान हुदैन
बदलिँदो मौसमको साथ-साथै रुघाखोकी हुनु एक सामान्य समस्या मानिन्छ । चिसो, प्रदुषण वा कुनै पनि मेडिकेशनको साइड इफेक्टको कारण खोकी लाग्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा घाँटी सुख्खा हुँदा कुनै पनि चीज निल्न कठिन हुन्छ । खोकी लाग्ने क्रममा सूप, अदुवा, मह, भिटामिन सी र मसालेदार आहारको सेवन फाइदाजनक हुन्छ ।
खोकी लाग्दा भूलेर पनि खान नहुने यी ५ चीज
केही यस्ता आहार पनि छन्, जसलाई खोकी लाग्ने क्रममा सेवन गर्दा नोक्सान पुर्याउँछ । आज हामी यस्ता आहारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसलाई खोकी लाग्ने सताएको बेला सेवन गर्नुहुँदैन नत्र स्वास्थ्य अवस्था थप खराब हुने सम्भावना रहन्छ ।
खोकी लाग्दा प्रोसेस्ड फूडको सेवनबाट बँच्न आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पस्ता, बेक्ड फूड, चिप्स आदिको सेवन गर्नुको सट्टा हरियो सागपात र पोषण दिने खाद्यको सेवन गर्नुपर्दछ ।
खोकी लाग्दा फ्राइड फूड्सको सेवनले निकै नोक्सान पुर्याउन सक्छ । चिप्स, फ्रेन्च फ्राइज र जंक फूडलाई खोकी लाग्दा खानुहुँदैन ।
साइट्रस एसिडले भरिपूर्ण फल खोकीको समस्यालाई थप बढाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा साइट्रस फलफूललाई पूर्ण रूपमा आहारबाट हटाउनु पर्दछ । यसको सट्टामा पानीले भरिपूर्ण तरबुजा, भुईकटहर, आलूबखडा आदिको सेवन गर्नुपर्दछ ।
दूधले र्याल वा खकार बढ्ने सम्भावना हुन्छ । खोकी लाग्दा दूध र दूधबाट बनेका चिजले श्वसन क्षेत्र, फोक्सो र घाँटीमा र्याल जम्मा हुन्छ । यसकारण जब तपाईलाई खोकीको समस्याले सताउँछ तब दूधको सेवन गर्नबाट बँच्नुहोस् ।
खोकी लाग्ने समस्या हुँदा घाँटी सुख्खा हुन्छ, जसका कारण कुनै पनि चीज निल्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बढी भन्दा बढी मात्रामा तरल पदार्थ सेवन गर्ने सल्लाह दिने गरिन्छ । तर चिया, कफी र एनर्जी ड्रिंकको सेवनबाट टाढा रहनुपर्दछ ।
लहरेखोकीबाट बच्ने घरेलु उपाय
चार चम्चा जैतूनको तेल तीनचार अलिकति ज्वानो हालेर हलुका तताउनुस् । तेल मनतातो पारेर राति सुत्नुअघि छातीको मालिश गर्नुस् ।
गला खराब हुँदा वा खोकी लाग्दा मुलेठी सेवन गर्नुस् । मुलेठीको एक सानो टुक्रा चुस्ने गर्दा लहरेखोकीबाट राहत प्राप्त हुन्छ ।
मह र मूलाको रस
एक चम्चा महमा एक चम्चा मूलाको रस मिसाएर पिउनुस् । त्यसमा सीधे नून मिसाएर पनि पिउन सक्नुहुन्छ । दिनको दुईचोटि पिउँदा खकार र लहरेखोकीको समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
लहरेखोकी ठीक पार्नका लागि केसर अचूक औषधि हो । यसमा भएको एन्टीब्याक्टेरियल तत्त्वले संक्रमण रोक्नुका साथै रुघाबाट पनि मुक्ति दिन्छ । केसरको स्टिग्मामा आधा कप पानी हालेर घोल्नुस् । यो घोललाई दिनदिनै सेवन गर्नुस् ।
अदुवामा एन्टीब्याक्टेरियल तत्त्व हुन्छ र यसले कफलाई सिध्याउन सहायता गर्छ । अदुवा पिँधेर रस निकाल्नुस् । अब त्यसमा मह मिसाएर पिउनुस् ।
अदुवाको रस, कागतीको रस र प्याजको रस मिसाएर पिउनुभए पनि हुन्छ । दिनदिनै अदुवा चपाउँदा पनि लहरेखोकीलाई केही हप्तामा हटाउन सकिन्छ ।
बेसारमा एन्टीब्याक्टेरियल, एन्टीभाइरल तत्त्व हुन्छन् र तिनले खकार जम्न दिँदैनन् । एक चम्चा महमा बेसार मिसाएर खानुस् । यसबाहेक बेसार हालेको दूध पनि पिउन सक्नुहुन्छ । बेसारले रुघाखोकीलाई चाँडो नाश गर्छ ।
एउटा लसुन मसिनो गरी काटेर पानीमा उमाल्नुस् । अब त्यही पानीले बाफ लिनुस् । दिनदिनै बाफ लिँदा दुई हप्तामा लहरेखोकी ठीक हुन्छ । आहारमा लसुन समावेश गर्नुभयो भने जाडोका समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ ।
Up Next गहुँबाट बन्ने आटा राम्रो, मैदा किन हानीकारक ? यी हुन् भित्री कारण